Nzira yekuzadza sei Curriculum Vitae nemawebhu templates? | ECommerce nhau
Imwe yemazano akakosha aunogona kutevera zadza iyo Curriculum Vitae ine mawebhu templates es dzivisa mukumiririrwa kwavo kuzere uye zviperengo, sezvo kushayikwa kwerudzi urwu kwaizoratidza kuti hauna hanya uye hauna hunyanzvi. Tarisa uone kuti ruzivo rwako rwese rwunowanikwa muCV, chinhu chakanyanya kukosha ndechekuti ruzivo rwekutaurirana rwakarurama, tarisa kwavari kanokwana kuita zviri zviviri, nekuti kana vakaedza kutaura newe zvakakosha kuti hapana chinokundikana. Inoshandisa a chimiro iwe chaunogona kuziva pamwe pakati pemazana ematemplate chii chiri paInternet zviri nani kwazvakarerekera mavara uye zvimwe zvakashinga ruzivo, mairafu edanho rekudzidza mune mamwe mativi, chena kumashure, mavara matema uye mavara anoverengwa. Iwe unoda kuona rumwe ruzivo? Zvakanaka, pazasi iwe uchaona zvese zvaunoda kuti uzive kupedzisa tangazve template kunge pro.
1 Matipi ekuzadza iyo Curriculum Vitae nemawebhu templates
2 Ndeipi Curriculum Vitae template yandinofanira kushandisa?
3 Nzira yekuzadza sei dzokazve matemplate?
3.1 Pane nzira nhatu dzakazara dzekunyora iyo Curriculum Vitae:
3.2 Izvo zvemukati zvemukati izvo zvinofanirwa kuve neCharriculum Vitae zvakakosha kuti uwane basa:
4 Dzivisa pakutangazve kwako
5 Isa pikicha
7 Kutsvaga kwaJobho Mapeji
Mazano zadza iyo Curriculum Vitae ine mawebhu templates
Isa makosi uye madhipuroma anoenderana nebasa raunoda kuzviratidza iwe.
Usambonyepa kana kuwedzeredza Unyanzvi hwako muCurriculum chiitiko chakajairika kuti usvike pazvinodiwa nzvimbo, asi kana uchifanirwa kuratidza kugona pabasa, munhu wese anozoona kuti wanyepa.
Dzivisa narcissism Uye kutaura nezve kuti iwe wakakwana sei semushandi zvinongotsamwisa muverengi uye kuti pamwe haugone kuwana iro basa.
Ronga mamwe ako mabasa mukutevedzana, usaedze kusiira mazuva kana hurefu hwezvibvumirano. Kana iwe uine ruzivo rwakashata nebasa, zviri nani kuti usariise, nekuti, kana vakataurirana nekambani, ivo vanopa yakaipa chirevo chako.
El tangazve chingangodaro chishandiso chine simba kwazvo iyo yatinayo kana tichitsvaga basa, mariri tinoratidzira zvese kubudirira uye kudzidza izvo zvatakawana mumakore apfuura, uye kuti izvi zvinogona sei kubatsira kukambani iwe yauri kunyorera kuti ivandudze munzvimbo dzakasiyana siyana, uye kuzadzisa zvido zvechinzvimbo. urikukumbira.
Wemunhu maneja maneja wekambani iwe yaunoda kupinda, ndichatonga maitiro eakaenderera mberiKana basa rako richishaya kwekutanga, ungatotadza kutariswa semumiriri wekupedzisira pachinzvimbo.
Ndeipi Curriculum Vitae template yandinofanira kushandisa?
Kana iwe usina chokwadi kuti ndeapi Resume matemplate ekuzadza, kurodha pasi akati wandei, isa data rako mune izvi uye wongorora kuti ndeipi inoonekwa nehunhu hwakawanda, hunyanzvi uye hwepakutanga. Kunyangwe zvingaite senge kutambisa nguva, zvinonyanya kubatsira kugadzira mafomati eCV akati wandei kuti uone iyo inokupa iwe chitarisiko chakanakisa mune zvakajairika mazwi.
Iwe unofanirwa kufunga kuti iyo CV yakaita sekushambadzira, kwako uye kugona kwako uye hunyanzvi hwekuita basa rakakosha mukambani. Chinokosha ndechekuti mupiro uyu unopa ruzivo nenzira yakajeka, yekongiri, yakanyatsotsanangurwa uye yakazara nzira.
Nzira yekuzadza sei dzokazve matemplate?
Pane zviuru zvematemplate zvakasiyana kuronga ruzivo rweCV yako. Iwe unofanirwa kusarudza iro rinoenderana zvakanyanya nerudzi rwebasa raunoda kuwana, pamwe neiro rinokodzera mararamiro ako nehunhu, kunyange hazvo chinhu chakakosha chiri kugara chichichengetedza hunhu hwechinyorwa uye kujekesa kweruzivo. .
Kugona kunyora yakanakisa CV iwe unofanirwa kuve wakajeka nezve izvo iwe zvaunofanirwa uye izvo zvausingafanire kusanganisira.
Pane nzira nhatu dzakazara dzekunyora iyo Curriculum Vitae:
Chronological: ruzivo rwakarongeka sezvazvakaitika pazuva
Inoshanda: Ruzivo rwakarongedzwa nemusoro wenyaya
Yakavhenganiswa: Inotanga nerudzi rweCV inoshanda uye inopera nekuverenga nguva zvichiteerana.
Izvo zvemukati zvemukati izvo zvinofanirwa kuve neCharriculum Vitae zvakakosha kuti uwane basa:
Iwe unofanirwa kusanganisira muchikamu chino, iyo ruzivo rwekutanga ruzivo, rakadai seZita, Zera, Nzvimbo yako yekuzvarwa, Bata kuburikidza nharembozha, tsamba uye masocial network, Kunonyanyisa mwero wezvidzidzo, pamwe nekuverenga kwekudzidzira basa uye chiitiko chebasa iyo yawakawana, ndiko kuti, haufanire kungosanganisira chete mabasa epamberi asi zvakare sanganisira makosi, mashopu, rubatsiro rwemagariro pakati pevamwe.
Manejimendi yeMitauro, Management yemadhijitari zvirongwa kana chaiyo software, pamwe neicho chikamu chezivo yacho, nyora kuburikidza nemairafu kana nehuwandu hwenhamba, chinhu chakakosha ndechekuti usatowedzere, kana kukanganwa hunyanzvi hwako, vanogona kukuvimbisa basa.
Ipa iyo yekugadzira spin. Vanhu vazhinji vanonyora maCV avo muMicrosoft word processor, inozivikanwa pasi rese nekubatsira kwayo, tiri kutaura nezve Microsoft Office Shoko, rinozivikanwa nekupa mhinduro mukumiririrwa kwehunhu, asi zvakare inozivikanwa nesarudzo dzayo dzisiri dzechinyakare dzekugadzirisa, pane idzo dzakatemerwa matemplate, ndosaka matemplate mazhinji epakutanga achitenderera paInternet izvo zvinoita mutsauko.
Nenzira imwechete iwe unofanirwa tsvaga mavambo mune chero mamiriro ezvinhu, kana iwe uchikwanisa kushandisa zvirongwa senge Photoshop kana Adobe Illustrator, ndiyo yakanakisa, ivo vanopa huwandu hwakawanda hwe graphic uye vector sarudzo dzekumiririra, dzinozopa mharidzo yako mhando yepamusoro, asi inoda ruzivo rwakati wandei, kunyangwe ivo vachibatwa zvakafanana munhau yekugadzirisa zvinyorwa ndizvo zvatiri isu chete kuda, panopera kugadzirisa kwese kwako ruzivo, kwakanyanya yakakura mharidzo uye graphic mhando, kuchengetedza uye kutumira yako CV mune PDF fomati.
Kana iwe ukasabata chero eaya mapurogiramu, hapana dambudziko, nematemplate akazara online paIzwi, iwe unogona zvakare kuita mutsauko.
Iva mupfupi. Kunyangwe nhoroondo yako yebasa ingave yakakura, edza kuve mupfupi pane zvaunotaura uye kurerutsa zviitiko zvako neruzivo, rangarira kuti zvishoma zvakawandisa.
Tsanangura zvinoitwa nebasa rega rega rawave naro, pamwe nebasa uye zvisungo zvaunazvo.
Dzivisa mune yako curriculum vitae
Tsanangura rako rese basa rechikoro, Hazvina basa kuti ubatanidze kwawakaenda kuPuraimari Chikoro, chokwadi ndechekuti kusanganisira degree rako repamusoro rezvidzidzo rinoburitsa zvakawanda zvekuti unofanira kunge wapedza mamwe madhiri kuti usvike ikoko, chakanyanya kukosha pamwe chinogona kunge chiri Chikoro chepamusoro kana iwe watopedza kana iyo yauri kudzidza, uye iyo University, ine mukurumbira mukurumbira inogona kukupa mukana pane vanopedza kudzidza zvimwe zvikoro.
Isa iyo mari yaunotarisira kuhwina, Chokwadi ndechekuti nguva zhinji iyo yaunobhadharwa zvinoenderana nebasa uye kukosha kwechinzvimbo chako mukusimudzira kambani, usaise chii iwe mira win, zvirinani isa shanduko pane iwe mira ita kuvandudza kambani.
Ita kuti dzidziso yako yechitendero, yezvematongerwo enyika uye yemagariro zvizivikanwe hazvina basa muCV yako saka siya chero ndima maererano neizvi.
Kunyepa nezvenzira yako yebasa, Sezvambotaurwa kare, kunyepa hakuzombofi kwakanaka, nekuti iwe unozowanikwa munguva pfupi inotevera.
Chikamu chinofuratirwa nevazhinji, asi icho chaunofanira kutarisira zvakawanda, chiri mufananidzo wawakaisa paunotangazve. Usasarudze iyo iwe yaunofunga kuti unonyanya kutsvinda mairi. Zvinokurudzirwa, sarudza chaizvo mufananidzo waunoda kuisa paCV yako, yakavhenekerwa, panowonekwa kumeso kwako kumberi, kwakachena, nevhudzi rako rakasanganiswa, necheka iro rinokuzivisa iwe, asi rakangogadzirwa, uye zvakakosha kuti kumashure kuchena.
Iwe unofanirwa kuburitsa chakakomba uye chehunyanzvi mufananidzo, kuti iwe wega unoonekwa, harisi boka kana bato pikicha kumwe kunhu.
Chimwe chikamu chakakosha ndeche inosanganisira zvinongedzo zvakanangana newebsite yako, blog yako wega, yako maSocial Networks senge Facebook, Twitter, LinkedIn uye izvo zvaunofunga zvakakosha kuchengetedza hukama hwepedyo hwehunyanzvi.
Semutsara wemusoro kana uchitanga Kosi yako iwe unogona kuisa zita rinokutsanangudza sehunyanzvi, handisi kutaura nezve izvo iwe zvaunoisa - kutendeseka, kushanda nesimba, kubata nguva nezvimwe. Hatisi kutaura nezve zvipikisheni, asi mazwi anotsanangura zvaunoita. Semuenzaniso, kana iwe uchishanda mukuvaka: Ariki, achinyanya kuronga Urban uye Zvakatipoteredza, Director weConstructora Garco.
Mune ruzivo rwebasa iwe unofanirwa kusanganisira:
Zita rechinzvimbo chawakabata.
Zita rekambani kwawakashanda.
Iyo nguva yenguva yawakashanda, pamwe nerondedzero pfupi yebasa rawakaita.
Usashandise hunyanzvi, kana mazwi akawandisa, Izvo zvakakosha kuti iwe urangarire kuti zvingangoita kuti yako CV ichatanga kusvika mumaoko emaPsychologists kana maSociologist muHuman Resources, vanozoongorora nhoroondo yako yemunhu neyePsychometric, usati wawana ruzivo rwakanyanya, mune hunyanzvi, saka zviri nani kuti iwe be clear and concise izvo kure kure uye zvakavhiringidza.
Sezvineiwo, yako tangazve haifanire kutora rinopfuura rimwe peji. Muchiitiko chekuti iwe uine basa refu uye akawanda mafundo, madiploma uye makosi, iro rekutanga basa rinofanirwa kuve rakakura.
Kutsvaga kwaJobho Mapeji
Paunenge uchinge wapedza kutangazve, nhanho inotevera ndeyekuparadzira iro izwi.
Nyoresa akanakisa webhusaiti, sezvo makambani makuru anotarisirwa nenzira idzi, senge Chokwadi, InfoJobs, LinkedIn, CompuTrabajo pakati pevamwe.
Usa skimp pakutumira yako CVIwe hauzomboziva kuti ndeipi kambani ichagamuchira chikumbiro chako chebasa, usakanda mapfumo pasi kana vasina kupindura yekutanga kana gumi, ramba uchiedza uye basa chairo rinosvika, mavanotarisa chaizvo chimiro chako uye kugona kwako kuitira kuti iwe unogona kuita uchiita zvaunonyanya kufarira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Zvechokwadi uye nhau » StartUps uye vanamuzvinabhizimusi » Nzira yekuzadza sei Curriculum Vitae nemawebhu templates?